सुदुरपश्चिममा क्वारेन्टाइन बस्ने भन्दा किन लुक्ने धेरै ? - NayaMedia:: Naya Media । Leading Nepali News Portal
सुदुरपश्चिममा क्वारेन्टाइन बस्ने भन्दा किन लुक्ने धेरै ?
शनिबार, चैत्र २२, २०७६ (April 4, 2020, 5:40 pm) मा प्रकाशित
जंगल बस्ने आफन्तलाई क्वारेन्टाइन पठाउन सहयाेग गराै
शनिबार, चैत्र २२, २०७६, ।
सुदुरपश्चिममा मात्रै अहिले सम्म चार जनामा काेराेना संक्रमण पुष्टि भइसकेकाे छ । यस संगै सुदुरपश्चिममा काेराेना संक्रमणकाे थप जाेखिम रहेकाे र थप संक्रमित हुन सक्ने डर पैदा भएकाे छ । एकै दिन थप तिन जनामा काेराेना पुष्टि भए संगै याे प्रदेश सबै भन्दा धेरै संक्रमित भएकाे प्रदेश पनि बनेकाे छ । यस संगै अर्काे एउटा संकेत पनि भेटिएकाे छ कि स्थानिय स्तरमा काेराेना फैलिदैछ । वा विदेशबाट आएकामा मात्र काेराेना भेटिएकाे छ, स्थानिय स्तरमा वा संक्रमितका परिवार वा समाजमा फैलिएकाे छैन भन्दै सान्त्वना दिने वा संक्रमण फैलिन सक्ने आकलन सामान्य रूपमा गर्ने परिस्थिती पनि सकिएकाेछ ।
थप संक्रमित भेटिए संगै स्थानियमा त्रास पैदा भएकाे छ । कयाैं व्यक्तिहरूले समाजिक सञ्जालमा त्रास व्यक्त गरेका छन भने प्रदेश सरकारलाइ संवेदनशिल हुन आग्रह गरेकाछन । केही दिन अघि मात्र भारतबाट फर्किएका कयाैं अझै विना परिक्षण क्वारेन्टाइन नगइ वा परिवार संगै सामान्य स्थितीमा गाउँ घरमै छन । यसले झन नराम्राे संकेत गर्छ ।
आज संक्रमण देखिएका लम्किचुहा नगरपालिकाका २१ वर्षीय युवक चैत्र ११ गते गाैरीफन्टा नाकामा नेपाल आउन पाउनु पर्ने भन्दै आन्दाेलन गर्ने ९९९ जना मध्यका एक हुन । उनी लगायत सबैलाई गाडीकाे व्यवस्था गरी घर पुर्याइकाे थियाे । उनी पनि ११ गते घर पुगे पनि १२ गते मात्र स्थानिय क्वारेन्टाइनमा राखिएका थिए । त्यस विचकाे जाेखिम पनि कम साेच्न सकिने अवस्था छैन । उनी त एक उदाहरण हुन, यस्ता र यसरी आनन्द संग बसिरहेका हजाराै जाेखिमयुक्त व्येक्तिहरू कैलाली, कन्चनपुर लगायत सुदुरपश्चिमका ९ वटै जिल्लामा छन ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दिएको तथ्यांक अनुसार फागुन २३ गतेबाट चैत १० गतेसम्म एक लाख ४३ हजार भित्रिएका छन्। यसरी भित्रिनेमा अधिकांश सुदूरपश्चिमकै रहेको अनुमान गरिएको छ। तर ती मध्ये कसैलाई पनि अनिवार्य क्वारेन्टाईनमा राखिएन। प्रदेशका नौँ वटै जिल्लामा १७ सय ७ जनालाई मात्र अनिवार्य क्वारेन्टाईनमा राखिएको छ। प्रदेशमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र नेपाली सेनाले समेत गरी तीन हजार नौँ सय ७३ शैया बराबरका क्वारेन्टाईन स्थापना गरिएको छ। तर भारतबाट फर्किएका तर क्वारेन्टाईन नबसेका डेढ लाखको अवस्था बारे सबै सम्बद्ध निकाय बेखबर छन्।
ठुलाे संख्यामा भारतबाट काम गरि फर्किएका सुदुरपश्चिमबासी आफै पनि कम सचेत बनेकाे देखिएकाे छ । यस्ता केही घटना र दृश्य देखिएका र सुनिएकाछन जसले झन जाेखिमलाई हाैसला दिईरहेकाछन ।
यस्ता घटनाहरू देखिए साथै सुन्नमा आए, आफै क्वारेन्टाइनमा जान नमानेर कतिलाइ प्रहरीले समाएर लग्याे । किन जान नमानेकाे भन्ने पनि आ-आफ्नै दावि छन । कसैलाई आफु बिरामी नभएकाेले किन जानु भन्ने थियाे भने कति त्यहा असहज बसाइ हुन्छ भन्ने थियाे । तर समाज परिवारलाई जाेखिममा राखेर आफै ढुक्क नभए घरमा परिवारमा बस्नु भन्दा असहज केही दिनकाे बसाइ नै सहि हाे । त्यस्तै आवश्यक व्यवस्था गर्न स्थानिय अगुवा, समाजसेवी तथा सरकारी निकाय लाग्न जरूरी छ । त्यस्तै कतिलाई घरजान हतार थियाे कसैकाे भनेकाे सुनेनन र अझै सुनदैनन जसले संक्रमणकाे जाेखिमलाई पनि हतारमा बाेलाईरहेका थिए । याे व्यावहारले पनि जाेखिमलाई नै साथ दिई रहेकाे छ ।
त्यस्तै कति त अझै पनि जंगलमा बास बसिरहेका छन, कतै देखिदैनन लुकेर बसिरहेकाछन । राति घरमा आउछन वा खाना जंगलमै मगाउछन ? याे काम पनि उपयुक्त छैन । यस्ताे बसाइ स्वय लाई, परिवारलाई र समाजलाई झन जाेखिमपुर्ण छ । स्थनिय निकायले पनि लुकेकालाई खाेजी गरी क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्छ र धेरै भन्दा धेरैकाे परिक्षण गर्नुपर्छ न की ज्वराे आउला वा खाेकी लाग्ला भनेर कुरेर बस्ने । कसैलाई मनकाे भय वा मनाेवैज्ञानिक समस्या छ भने पनि सम्झाइ बुझाइ क्वारेन्टाइन सम्म पुर्याउनु नै अन्तिम र एममात्र विकल्प हाे । यदी गर्न सकिएन र यस्तै चलिरह्याे भने थप जाेखिम निश्चित छ । परिवारका अन्य सदस्यले पनि जंगल बस्ने आफन्तलाई सहयाेग हाेइन क्वारेन्टाइन पठाउन सहयाेग गराै ।
त्यस्तै कतिपयलाई दुइचार दिन केही लक्षण देखिएन वा अवस्था सामान्य लागेमा सामान्य व्यावहारमा फर्किरहेका छन । यदी यस्ताे हाे भने बुझ्न जरूरी छ कम्तीमा १५ दिन बिचार गर्नुस, त्यतिन्जेल सबै कुरा विर्सेर क्वारेन्टाइनमा जानुस । त्याे नै राम्राे र सही निर्णय हाे लुकेर वा केही छैन भन्दै बस्ने गल्तीले भयावह स्थिती श्रृजना गर्न सक्छ ।
त्यस्तै अन्य केही सुन्दा सामान्य लाग्ने तर जाेखिमपुर्ण बन्द गर्नै पर्ने काम र व्यावहारहरू छन, जाे स्वयम भारतबाट आएकाहरू, तिनका परिवार र सबै व्यक्तिहरूले गर्नै पर्छ नगरे सम्वन्धित निकाय र प्रत्यक सदस्यले ध्यान दिनै पर्छ । प्रायले घर फर्कदा मिठाइ लगायत उपाहार ल्याएका हाेलान, त्यस्ता चिजहरू विस्तारै बाडिदै हाेला वा बाडि सकियाेहाेला त्यसमा सचेत र साथै अव बन्द गराै । तपाईलाइ आएकाे वा तपाइले ल्याएकाे मिठाइ संगै काेराेना बाडिइरहेकाे पनि हुन सक्छ । त्यस्तै मलाइ केही भएकाे छैन भन्दै भेटघाट गर्दै र फर्किएकाे उपलक्ष्यमा खसी काटेर खादै गरेकाे पनि देखियाे, सुनियाे याे पनि निकै जाेखिमपुर्ण थियाे र छ । यसरी यत्राे विश्व आक्रान्त पारेकाे काेराेना संग सामान्य रूपमा ग्रहण गर्ने गल्ती गर्नु नै मुख्य जाेखिम बाेलाउनु हाे ।
त्यस्तै यतिबेला गहुँ काटने तथा भित्र्याउने बेला हाे । कसैले पनि खेतमै छाेड्न सक्दैन र सम्भव पनि हुदैन । यस्ता कामहरू प्राय समुहमा आलाेपालाे गरी गर्ने चलन छ । साथै भारत बाट आएकाे भन्दैमा काम नगरि बसेकाे पनि पाइदैन र सकिदैन पनि हाेला, किनकी कति त त्यही कामकै लागी भनेर घर फर्किएकाछन । तर सावधानी अपनाउनै पर्छ । सक्दाे परिवार बाहेक ठुलाे समुहमा काम नगराै । शंकास्पद व्यक्तिलाइ संगै काम गर्न नलैजाउ वा नजाउ साथै परिवार र समाजमा टाढै बसाै, भेटघाट पछी गराैला, माया पछी साटाैला । शंकास्पदले पनि टाढै रहनु भनेकाे आफ्नै र परिवारकैलागी गरेकाे हाे । नजिक आएर जिवन नै जान सक्ने सम्भावना रहन्छ भने आफ्ना हरेक व्यावहारलाई टाढै राख्नु बुद्धीमानी हाे ।